Lithini udidi lwetheyithi ebizwa ngokuba yindawo yokuqala - ukuya kweyona balcony ephezulu? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ngawaphi amanqanaba etheyithi abizwa kuyo - ukusuka kwindawo yokuqala - aye kweyona balcony ephezulu?
imigca esondeleyo kwindawo yesebe ziindawo zokudlala. Ukubalandela yindawo yemidlalo yeqonga, ephezulu kancinci - i-mezzanine (ukuba ilungiselelwe ukwakhiwa kwesi sakhiwo). Kwaye i-balcony
Iholo kwiholo yemidlalo yeqhekeza yahlulwe yangamacandelo ama-4: phantsi komhlaba, Umdlalo weqonga, i-mezzanine и ibhalkoni.
Iparterre Eli lelona candelo lophantsi lweholo, ebekwe ngqo phambi kweqonga kunye ne-orchestra pit, ukuba ikwindawo yemidlalo yeqonga.
Iparterre kunye ne-orchestra
Amphitheatre ibekwe kude ukusuka kwinqanaba kwaye ingaphezulu komgangatho womhlaba, ukusuka kuyo yahlulwe yindawo ebanzi.
IMezzanine ibizwa ngokuba yi-tier esezantsi yeebhalconi eziphezulu kwebala lemidlalo.
Izibukeli ezibekwe ngaphezulu kwe mezzanine zibizwa ibhalkoni. Iibhalconi zahlulwe zayi-tiers, 1, 2nd tier, njl.
Kananjalo, iithiyetha ezininzi indawo yokuhlala. Indawo yokuhlala yeBenuar okanye nje benoir ibekwe kumacala omabini omhlaba kwinqanaba leziganeko okanye ngaphantsi kancinci. Kukho indawo yokulala ye-mezzanine ebekwe ngaphezulu kwe-Benoir, kunye nendawo yokuhlala ye-1, 2nd kunye nezinye iibhutsi.
Umqolo ophambili kunye nomgca wokugqibela kweqonga, apho amaxabiso asezantsi ahlala ebizwa ngokuba yi-jackdaw. Imigca esondeleyo kwinqanaba kwinqanaba lemidlalo yeqonga ziindawo zokubeka. Ukulandela izitali yindawo yemidlalo yeqonga, kodwa ngaphezulu kwe-amphitheatre kufuneka ibe yi-mezzanine.
Uluhlu lweqonga lomdlalo weqonga ukusuka kwelokuqala ukuya kwelokugqibela basasazwa phakathi kwezithuba ezine zethiyetha. Lo ngumgangatho womhlaba, i-amphitheatre, i-mezzanine kunye ne-balcony.
Kumacala esiteji kwi tiers kukho indawo yokuhlala iBenoir, mezzanine kunye ne balcony.
Kwiindawo zemidlalo zeqonga zenkulungwane ye-19, kukho iibhalconi ezinamabala amaninzi.
Kwiindawo zemidlalo yePhondo, kwenzeka ukuba akukho midlalo yeqonga kunye (okanye) ne-mezzanine. Ngokuhambelana, iibhokisi ze-Benoir kunye ne-mezzanine.
Ngokwam, ndiyazi apho kuphela phantsi komhlaba и ibhalkoni. Ndiyazi kwi-cinema, ngokoluvo lwam akukho nto ngaphandle kwesitali kunye ne-balcony.
Iparterre Ezi zihlalo ezingaphambili.
Mezzanine -awa, ngokoluvo lwam, izihlalo ezingemva, eziphakanyiswe kancinci yinyathelo eliphakamileyo kwaye ke zahlulwe kwizitulo zomhlaba.
Emacaleni kusekho iibhalconi ezincinci, ezazibizwa ngokuba ziindawo zokuhlala. Ngoku, kwi-Intanethi ndafumanisa ukuba elona gama lichanekileyo Ibhedi kaBenoire.
Ibhalcony Ifakwe ngasemva kwaye, ngokungathi kunjalo, ngaphezulu kwe-mezzanine, kumgangatho wesibini.
Ngokwesahluko solwamkelo ngokubanzi, uchungechunge kwimidlalo yeqonga zihlala zibizwa ngolu hlobo lulandelayo. Okusondeleyo kwindawo yesehlo ziindawo zokudlala. Okulandelayo yindawo yemidlalo yeqonga, ngakumbi nangaphezulu - i-mezzanine, kwaye kunjalo, yibhalcony. Uluhlu oluphezulu luhlala lubizwa ngokuba yi-jackdaw.
Iindawo ezikufutshane neziganeko ezichaseneyo ngokuthe ngqo azibizwa ngokuba ngumgangatho womhlaba. Emva kwayo kuphakama ibala lemidlalo. Emacaleni eezitali, eziphakamileyo ezantsi ngaphezu kwayo indawo yokuhlala eneebhenoire. Umgangatho wesibini ojongane nesiteji ngebhalkhoni, iindawo ezisemacaleni kumgangatho wesibini zibizwa ngokuba ziindawo zokulala i-mezzanine. Eyona ndawo iphezulu igalari, iindawo ezinqabileyo.
Ngaphambili, ngaphambili kweetafile, apho bengahlalanga, kodwa bemi, bekukho izihlalo kwezihlalo (i-Onegin ihamba phakathi kwezitulo emilenzeni), namhlanje zonke izitulo ezivenkileni zihleli.
Ke, umzekelo, eMariinka, kukho indawo yokuhlala ye-benoir, emva koko - indawo yokuhlala ye-mezzanine, emva koko-tiers, kukho ezintathu kuzo eMariinsky Theatre, nakwiAlexandrinsky Theatre, umzekelo, iitayi ezi-4, akukho benoir kule theatre.
Embindini we-tier kunokubakho iindawo ezibizwa ngokuba yi-balcony, ngasendleleni, ezi ziindawo ezilungileyo zokubukela ukusebenza kwe-ballet. Xa ndithenga amatikiti e-ballet, okokuqala ndikhangela indawo embindini we-2 balcony tiers. Kuyabonakala ngokucacileyo kwaye amaxabiso afanelekile.
Ingca ephezulu yayidla ngokubizwa ngokuba yigalari okanye ikomiti yesithili. Namhlanje, le tier yesi-3 (ngokuqinisekileyo, ephakathi embindini wayo) -ewona maxabiso afikelelekayo, ahlala kuhlala abafundi. Iminyaka yam yesikolo iphumelele kwikatala yesi-3. Kodwa emva kokumamela i-quot; ibhola yeMasquerade; ukusuka kwindawo yokulala yasebukhosini.
Ndihlala ndisiya kwindawo yemidlalo yeqonga, ukuba amatikiti okudlala awabizi, ndiye ndithenge emhlabathini - ezi ziindawo ezihamba ngqo ukusuka kwinqanaba okanye i-orchestra pit ukuya eludongeni olungasecaleni, imigca engasemva yezitali zibizwa ngokuba yindawo yemidlalo yeqonga, zahlulwa yindawo. Ukuba ixabiso elincinci, ke uthenge kwi-balcony. Ibhalcony inamahlosi aliqela: i-tier esezantsi ibizwa ngokuba yi-mezzanine, emva koko i-balcony yengwe yokuqala kunye neyesibini.
Kukho iindawo ezahlukileyo ezifumaneka ngokuthe ngqo kwinqanaba inqanaba lasekhohlo nasekunene - ibhokisi.
Amagama eendawo zemidlalo yeqonga afudukayo evela kwimidlalo yasesitratweni ngenxa yeqonga. Abaphulaphuli babemane bema esitratweni, emhlabeni, kungoko igama elithi Qu; parterquot ;. Ukusuka kwizindlu ezingabamelwane ukusuka kwiibhaloni umntu unokujonga into eqhubayo, njengoko baqala ukubiza iindawo kwiindawo zemidlalo yeqonga kamva.
Iibhalconi ezahlukileyo zinamagama wazo - i-mezzanine, iamfathiyetha, igalari.
Amagama emiqolo kwindawo yemidlalo yeqonga:
Kwangoko emva kwesehlo, baya ngolungelelwano umgangatho womhlaba, i-amphitheatre, i-mezzanine kunye ne-balcony. Ukuhanjiswa ngokuthe ngqo kolu chungechunge kukulandelayo:
Oku Uyilo lweholo enkulu I-KTZ quot; Ibhotwe kwiYauz, apho ungaboni khona kuphela indawo, kodwa namagama ayo yonke imiqolo.
Izithethi zangaphambili ziye zaphinda zatsho ukuba imiqolo yezitulo ezivela kwizitulo zeokhestra ziye eludongeni olungaphaya zibizwa ngokuba ziindawo zokugcina iimpahla. Kutheni bebizwa njalo? Ngokuchanekileyo kungenxa yokuba ayisekho kwi-balcony, kodwa emhlabeni - kwiphondo laseFransi, quot; kwinyikima ;. Ukuba ucinga ukuba ezona zigqibeleleyo kwezona zibiza kakhulu - imigca ephezulu yeebhalkhoni, i-jackdaw - ibizwa ngokuba sisithili, kwaye ngesiNgesi nakoothixo (thixo) neparadesi (iparadesi), kubandakanya ne-French ngokwayo - iparadis, ke intsingiselo yezulu nomhlaba kwisixhobo sethiyetha.
Kule foto yendlu yeOdessa Opera, iifayile zibonakala ngokucacileyo - embindini weefoto.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,279.